IsazisoInkomba engachazwanga: dirname in /home/wwwroot/www.sogears.com/plugins/system/jch_optimize/vendor/jchoptimize/core/src/Helper.php on line 488
Ukudlidliza motors zokukhiqiza kanye nokuthengisa yezimoto vibration yezimboni
Izimboni eziguquguqukayo zezimboni zokukhiqiza nokuthengisa
Ukudlidliza motors yokukhiqiza nokuthengisa
imoto enkulu yokudlidliza, imoto yokudlidlizela ezimbonini, intengo enhle yemoto yokudlidliza, imoto yokudlidliza enamandla, imoto yokudlidliza engu-110v ne-240V, izinjini ezidlidliza ugesi, imoto yodlidliza yokudlidliza, izinjini ezisebenza ngogesi ezisetshenziselwa izinhlelo zamatafula wokudlidliza kokhonkolo, isidlidlizi semoto se-hopper.
Singabenkampani yezimboni yezokukhiqiza nokuthumela izinto i-Global Industrial Vibration Motors yokukhiqiza nokuthumela kwamanye amazwe evela eChina.
I-Industrial Vibration Motors
Isithuthi esincanyana noma esikhulu esisebenza nge-vibration shaker motor, i-220v noma i-380v noma enye imoto ye-vibrator, vele usazise futhi sizokunikeza okungcono kakhulu.
Thola i-sedict eyengeziwe mayelana nemoto yethu
Umkhiqizi we-Vibratory and Unbalance Vibrating Motors
Ukucaciswa kwemoto yethu ye-Vibration kuqedile, kufanelekile ukufakwa kwaseMelika i-110V, i-Europe 220V, umphumela omuhle wokusebenza futhi kufanele ukutusa! isidlidlizi motor inezinhlobo ezahlukahlukene zezicelo. Ixazulula inkinga yokuhlelwa kwezinto ezibonakalayo enkampanini yethu futhi iyasiza kakhulu.
Isicelo esibanzi sisebenzela izimboni
Umshini wethu wokudonsa wekhonkrithi kagesi okhonkolo kagesi okhanyayo wegesi okhanyayo uyimithombo evamile yokudlidliza yemishini ehlukahlukene yokudlidliza, isithasazi esidlidlizisayo, isikrini sokudlidliza, isihambisi esishisayo, umshini wokudlidliza ogelezayo njalonjalo. Kusetshenziswa kabanzi kumandla kagesi, izinto zokwakha, amalahle, izimayini, izinsimbi, imboni yamakhemikhali, imboni ekhanyayo, i-foundry nezinye izimboni.
I-Vairous Mounting Option yezinhlobo eziningi zezicelo
I-Horizontal vibration motor ukufakwa kweqoqo eliguqukayo le-eccentric block emabili yomphetho we-rotor shaft, ne-eccentric shaft ngamandla we-centrifugal akhiqizwa ngokujikeleza okuphezulu ukuze uthole amandla ajabulisayo. Izingxenye ezishintshashintshayo zezimoto ezishintshashintshayo zinezinga lokushisa elikhuphuka ekusebenzeni isikhathi eside okuqhubekayo kungalawulwa kahle, ukuze i-vertical vibration motor ibe nokuphila okukhethekile.
Ubukhulu beCompact buhle ukulingana nezimboni eziningi.
Isisindo somshini wokukhanya, ivolumu encane, ukwakhiwa okulula, ukufakwa okulula nokulungiswa. Ukwakhiwa okuphelele okuvaliwe, kusetshenziswe kunoma isiphi isimo sokusebenza esingenayo imfuneko yokuqhuma.
Indlela eqinile yokupakisha yokuqinisekisa ephephile ngesikhathi sokuhamba.
i-fumigation kesi lokhuni noma isicelo samakhasimende.Kulungele ukushintsha amandla ashukumisayo ngokulungisa i-engela yamabhlokhi eccentric.
Vibration Motors We Supply
Ama-motors amancane wokudlidliza emotweni enkulu, yezimboni yokudlidliza ezigabeni ezintathu, imoto enamandla yokudlidliza ngamandla amakhulu wehhashi, isigaba esisodwa sokudlidliza imoto yasekhaya noma ukusetshenziswa kwesicelo sokukhanya. isivinini sokudlidliza kwejubane, imoto edlidlizelayo yetafula elidlidlizayo, imoto yokudlidliza ye-hopper
I-Vibration motor YZU
Imoto yokudlidliza yezimboni ngenani elihle
Ukudlidliza imoto MVE
Imoto yokudlidliza i-MVE Dust Proof Water Proof
I-Vibration motor YZS
Imoto yokudlidliza enamandla enamandla
Vibration motor Mini Type
Mini Vibration motor vibrators zangaphakathi nge Thermosensors
I-Explosion Proof motor yesigaba esine-asynchronous vibration motor
Ukudlidliza imoto DC To AC
24V 12v dc vibration motor Brushless nesilawuli esithengiswayo
I-Vibrator motor 370
Kuhlanganiswe futhi Kufakwe Imbobo Yokudlikiza Okuhlanganisiwe
I-Vibrator motor 1.5-6V
I-Tiny DC Vibration Motors Miniature efakwe ngokugcwele noma ishafu
Ukukhetha kwe-Vibratory Motors
Singakuthumela okucacisa okwengeziwe kwemoto uma sibuyekeze uphenyo lwakho. Isilinganiso esihle kakhulu sizothunyelwa ngasikhathi sinye. I-Industrial Vibration Motors ukusetshenziselwa imishini yokuphinda inqwaba njenge iyavevezela abondli, abahambisi, iyavevezela amatafula, izikrini, izihlungi zesikhwama esinobuningi, ukulethwa kwesikhwama esiningi nokuningi
“Ukuzithandela kungisizile ngafunda amakhono amasha futhi ngahlangana nabantu abakhulu emhlabeni wonke. Kuyangithokozisa ukubona umuntu emamatheka ngoba ngikhethe ukuvolontiya namuhla futhi lokho kungilethela ukuthula okuphelele. Ngibonga abakwa-Givers ngokunginika ithuba lokuzithandela ”
Ukuhola Kwethimba Lokuzithandela
“Bengihlale ngiyilungu lomphakathi elikhuthele kodwa njalo bengizizwa sengathi ngingenza okuningi kakhulu. Inhlangano esiza abantulayo inginike ithuba lokuthi ngisebenzele okuthile engikuthanda kakhulu. Ngaso sonke isikhathi uma ngiyingxenye yomkhankaso ophumelelayo, ngizwa sengathi nginamathisele okuningi. ”
Umhlaziyi Wokucwaninga Komkhankaso
“Enye yezingxenye ezimangalisa kakhulu zoMnikezeli ukuthi zikuvumela ngokweqiniso ukuthi ubambe iqhaza kunhloso enkulu ngendlela ofuna ngayo. Ngivolontiya njalo futhi yonke into encane engiyenzayo iyaziswa. Ngiyabona ukuthi ngisho nezenzo ezincane zingenza kanjani umehluko omkhulu empilweni yomuntu-amandla eqiniso esihlalo. ”
Thola izibuyekezo kanye nezindaba zakamuva ezivela ngqo eqenjini lethu. Mane ufake i-imeyili yakho engezansi:
ISogears inikeza cishe yonke imikhiqizo kagesi e-vibrator motor esebenza kahle embonini.